Custom Precision CNC mihodina Lathe Service-OEM / ODM China CNC manodina faritra mpanamboatra
Ouzhan dia mari-pahaizana matihanina sy manana traikefa Serivisy fanodinana CNC mpamatsy, mpanamboatra, mpivarotra ary mpanondrana any Sina, dia niavaka tamin'ny fanomezana matihanina Serivisy fanodinana OEM / ODM CNC ho an'ny kalitao avo lenta nefa mora vidy Faritra mihodina amin'ny CNC, Faritra lathe CNCna singa masinina avo lenta misy milina mandroso sy fiasan-tanana mahay. Toy ny ampahany amin'ny tanany, ny faritra amin'ny lovia, ny ampahany amin'ny zoro, ny mpanasa lamba, ny bolts, ny fantson-drano, sns.
Ny mandroso Mihodina ny CNCivon-toerana sy serivisy manokana dia manohana fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny varahina, vy vy, vy karbonika, aliminioma, titanium ary plastika. Izahay dia handamina ny fizotran'ny fanodinana marina indrindra indrindra, amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny zavatra takinao rehetra, dia azonay atao matetika ny mampihena ny fandanianao vola betsaka indrindra. FombanaySerivisy fanodinana milina CNC antoka foana fa nahazo mpanjifa kalitao avo indrindra Nihodina ny faritra ary ny serivisy mieritreritra indrindra.
Ouzhan Precision CNC manodina ny fahaiza-manao sy ny endri-javatra:
OuZhan dia manana fahaizana manome tolotra latina miovaova mahomby amin'ny vidiny sy vokatra avo lenta avo lenta ho an'ny tetikasa marobe.
- Tohano ny famokarana andiany ambany, antonony hatramin'ny avo
- Fanamboarana prototyping haingana sy fampiasana farany
- Fahamarinana avo lenta, famokarana haingam-pandeha ary fahamendrehana avo lenta
- Be dia be ny fitaovana vy sy plastika tsy voatery
- Famokarana matanjaka sy fotoana fandefasana haingana
- Famaranana ilaina ary fandeferana henjana no misy
Maninona no mifidy Ouzhan CNC Turning Services
Ny fitaovana famokarana fototra dia nohafarana avy any Suisse sy Japon, izay afaka manome ny vidin'ny fihodinan'ny CNC mora vidy.
2. Fahaiza-manao famokarana CNC marobe
Ho fanampin'ny fihodinana, izahay dia manokana amin'ny fikolokoloana, ny fanodinana, ny fandavahana, ny fihodinan'ny CNC ary ny fikosoham-bary, hahafahanao mahazo safidy maro amin'ireo faritra masinina CNC avy amin'ny ekipa atokisantsika.
Lisitr'ireo milina Ouzhan CNC
Inona ny serivisy fihodinan'ny CNC sy ny fomba fiasan'ny fihodinan'ny CNC
Fihodinana CNCmamokatra faritra misy endri-tsolika amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fitaovana amin'ny tsorakazo vy na plastika amin'ny alàlan'ny fanapahana, navoakan'ny foibe na fitaovana mivantana. Ny CNC Turning dia mampiasa milina fehezin'ny solosaina hamoronana vokatra farany hafa. Ny fizotrany dia mampiasa fitaovana fanapahana teboka tokana izay mampiditra mifanandrify amin'ny fitaovana hokapaina. Ny fitaovana dia mihodina amin'ny fiovana hafainganam-pandeha ary ny fitaovana fanapahana mamakivaky dia mamorona fanapahana varingarina miaraka amin'ny refy marina. Izy io dia ampiasaina mba hamoronana boribory boribory na tubular avy amin'ny singa lehibe kokoa. Izy io dia dingana mandeha ho azy ary ny hafainganam-pandeha dia mety ho fanitsiana ho an'ny tena marimarina kokoa fa tsy hanodina ny lathe amin'ny tanany.
Raha ny fizotry ny fihodinan'ny CNC, ny fomba fanodinana subtractive dia matetika tanterahina amin'ny lathe CNC na ny foibe fihodinana. Alohan'ny hanapahana, ny kaody G ary ny milina fanodinana dia mila omanina, avy eo afatory ny banga tsy misy kitapom-bokatra ao anaty chind of spindle, ny chuck dia mitazona ilay sombin-javatra rehefa mihodina ilay spindle. Miaraka amin'ny spindle mihodina amin'ny hafainganam-pandeha sasany, ny cutter fihodinan'ny teboka tokana mijanona dia handeha amin'ny lalana mitanjozotra izay mifanitsy amin'ny axis ny fihodinana ary manala fitaovana be loatra, mampihena ny savaivon'ny sakana, mamaritra ny refy ary mamorona famaranana malama, ho mahazo ampahany farany voatokana ho an'ny CNC namboarina niaraka tamin'ny famaritana tiana.
Fitaovana fanodinana CNC - Fitaovana ampiasaina amin'ny Lathes CNC